तनावमा डोनाल्ड ट्रम्प, महाअभियोग लाग्नेभएपछि आइलाग्यो संकट !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
तनावमा डोनाल्ड ट्रम्प, महाअभियोग लाग्नेभएपछि आइलाग्यो संकट !
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : शुक्रबार, कार्तिक १५, २०७६
काठमाडौं–अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाइने भएको छ । अमेरिकाको हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभले बिहिबार राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव चलाउने प्रस्तावलाई मञ्जुरी दिएको छ ।
यसको पक्षमा २३२ भोट हालियो भने विरोधमा १९६ भोट खस्यो । प्रतिनिधी सभामा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत छ । यसैको नेतृत्वमा महाभियोग अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरियो । ट्रम्पमाथि आफ्ना विरोधी जो बिडेन र उनका छोराविरुद्ध युक्रेनी ग्यास कम्पनीमा भ्रष्टाचारको मामलाको अनुसन्धानका लागि युक्रेनमाथि दबाब दिएको आरोप छ ।
प्रस्तावमा सार्वजनिक अनुसन्धान गर्न र यसको नेतृत्व कंग्रेसको गोप्य मामलाको समितिका प्रमुख एडम स्किफलाई दिन भनिएको छ । समितिका प्रेसिडेन्ट म्याक्गवर्नले राष्ट्रपतिद्वारा शक्तिको दुरुपयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा र चुनाव प्रक्रियाको गोप्य सम्झौता गरेको प्रमाण आफूसँग भएको बताए ।
ट्रम्पलाई पदबाट हटाउनका लागि २० रिपब्लिकन सांसदले आफ्नै राष्ट्रपतिविरुद्ध भोट हाल्नु पर्नेछ । यद्यपि, यसको सम्भावना कमै छ । अहिलेसम्म अमेरिकी राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोगमार्फत् हटाइएको छैन । अमेरिकाका १७ औं राष्ट्रपति एन्ड्रयू जोनसन र ४२ औं राष्ट्रपति बिल क्लिैटनविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया चलेको थियो तर दुबैजना योबाट बचेका थिए । प्रतिनिधी सभाको ६ समितिले राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाभियोगको मामलाको अनुसन्धान गर्नेछ, सबैभन्दा बलियो मामलालाई न्यायिक समितिमा पठाइनेछ ।
यसमा गलत काम भएको प्रमाण नभेटिए ट्रम्प सुरक्षित हुनेछन् भने प्रमाण भेटिए प्रतिनिधि सभा महाभियोगका विभिन्न धारा लगाउनका लागि मतदान हुनेछ ।
यो मतदानमा बहुमतभन्दा कम भोट खसे ट्रम्पलाई कुनै खतरा छैन तर बहुमतभन्दा धेरै भोट आए महाभियोगको मामला अघि बढ्नेछ ।
चीनमा धमाधम बाइबल जलाइयो, चर्ज भत्काइयो (भिडियोसहित )
प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिए डाक्टर बलात्कार गर्ने चार अभियुक्त
यात्रुबसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा ९ जनाको मृत्यु
जहाज दुर्घटनाको विषयमा प्रधानमन्त्रीको माफी
विमान घरमा ठोक्किएर दन्कियो आगो, २४ जनाको मृत्यु
शक्तिशाली भूकम्पपछि फैलियो त्रास